Magaalooyinka ugufiican dalka turkiga inaad ku noolaato - ALinks
Magaalooyinka Turkiga waa halka aad ku arki karto nolosha Turkiga sida ugu cad.
Qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka Turkiga, xitaa kuwa hadda loo arko inay yihiin xarumo dhaqaale iyo warshadeed oo casri ah, waxay leeyihiin xididdo qadiimi ah waxayna leeyihiin degmooyin duug ah oo quruxsan qaab dhismeed qarniyadii hore ka jiray, ha ahaadeen Ottoman, Byzantine ama Classical.
Hubso inaad ku darto wakhti magaaladaada safaradaada haddii aad rabto inaad aragto qaab dhismeedka quruxda badan ee boqortooyooyinkii soo maray, tusaalooyinka qaar ka mid ah cunnooyinka ugu fiican dalka, ama aad si fudud ugu lumiso buuqa suuqa.
Liiskayaga magaalooyinka ugu sarreeya dalka Turkiga, waxaad qorsheyn kartaa halka aad ka heli karto jawiga magaalada weyn.
Istambul waxay ku xamashaa hidaheeda taariikhiga ah iyo hummaag casri ah oo waji leh leh cilad ay ku yar yihiin magaalooyin kale. Tani waa magaalada ugu weyn Turkiga. Mashruucyada waaweyn ee caanka ah ee magaalada Imperial ee labada dowladood ee Byzantine iyo Ottoman ayaa laga heli karaa halkan.
Haddii aad rabto inaad isku darto qorraxda iyo ciidda iyo waxyaabaha ku habboon magaalada, Antalya waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu booqdo Turkiga. Xeebaha Konyaalti iyo Lara labaduba waxay bixiyaan nolol xeebeed dib-u-dhac ah, hase yeeshee magaalada oo leh firfircooni iyo kafeeyo kala duwan iyo dhaqanka maqaayadaha ayaa wali si fudud loo heli karaa.
Bursa, waa Caasimaddii ugu horreysay ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, hadda waa magaalo fidsan, magaalo casri ah oo ay ku nool yihiin laba milyan oo qof.
Inta badan dadka soo booqda waxay jecelyihiin inay waqtigooda ku qaataan aagagga bartamaha magaalada. Astaamaha ugu caansan ee laga soo qaatay xilligii Imbaraadooriyadda Bursa waa Masjidka weyn ee 20-domed ah, gudaha si qurux badan leh dusha sare ee labada Masaajid Yesil iyo Qabriga iyo masaajidyada midabbada leh ee midabbada badan leh ee Saldanadihii ugu horreeyay ee Cusmaaniyiinta ee ku dhex yaal Dhismaha Muradiye.
Turkiga, Anatolia, Sanliurfa, barkadda Abraham oo ay weheliyaan Masaajidka Rizvaniye
Sanliurfa, oo horey u ahayd magaalada Byzantine ee Edessa oo sheegatay inuu ku dhashay Nebi Ibraahim, ayaa waligeed ahayd mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan Turkiga.
Maaddaama goobta qadiimiga ah ee Göbeklitepe ay noqotay mid ay dalxiisayaashu aad u heli karaan sannadihii la soo dhaafay, ayaa waxaa yimid qulqulatooyin cusub oo soo booqda. Sannadkii 2019-kii, UNESCO waxay u magacowday monolith-yadaas loo yaqaan 'Neolithic monoliths', kuwaas oo ku yaal bannaanka magaalada, inay yihiin Goob Dhaxal Adduun.
Iyada oo ay ku noolyihiin dad gaaraya 2.9 milyan, magaaladan caasimada ah iyo magaalada seddexaad ee ugu weyn ee Turkiga waxay u adeegtaa xarun magaalo-weyn oo safar maalinle ah ku taga meelaha ku dhow ee Efesos iyo Pergamum.
Izmir, oo ku fidsan badda Aegean, ayaa hadda loo arkaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu firfircoon Turkiga. Dhallinyarnimadeeda, tamarteeda ganacsi iyo wejiga isbeddelka leh ayaa qarinaya taariikh hore oo caan ah.
Magaaladan dhex-dhexaadka ah ee 100,000 ee qof waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago Turkiga ee ku teedsan xeebta Mediterranean-ka, iyada oo ay ugu wacan tahay dekedda hore ee cajiibka ah
Fethiye waa goob caan ah oo yachting. Laga soo bilaabo safarada doonta maalinlaha ah ee doonta shaqaalaynta doonyaha gaarka loo leeyahay ee maalinlaha ah, waxaa jira hawlo dhoof ah oo kala duwan.
Iyada oo ay ku nool yihiin shan milyan oo qof, caasimadda Turkiga iyo magaalada labaad ee ugu weyn ayaa ku yaal badhtamaha waddanka. Ankara waa xarun weyn oo shirkad iyo warshadeed, laakiin waxaa jira laba sababood oo qasab ah oo loogu daro safarkaaga Turkiga.
magaalooyinka ugu fiican dalka turkiga in lagu noolaado
Kiiboodhka Ugu Fiican Bannaanka Laabtop-ka
Shaqada iyo shaqada Bulgaria
Meelaha ugu Fiican ee lagu booqdo Sacuudi Carabiya